Waa'een namoota Naqamteetti du'ani miidiyaalee hawaasaa irratti odeeffame dogongora jedhe mootummaan - BBC News Afaan Oromoo
Waa'een namoota Naqamteetti du'ani miidiyaalee hawaasaa irratti odeeffame dogongora jedhe mootummaan
Goodayyaa suuraa Miidiyaan naannoo Oromiyaa wanti dhiyeenya gabaase sirrii ta'uu dhabuu obbo Addisuun dubbataniiru
Ayyaana Irreechaa magaalaa Naqamteetti gaafa Dilbataa kabajame hordofe jeequmsa uumameen lubbuun namaa kan darbee fi qabeenya irratti miidhan kan dhaqqabe yoo ta'u, eenyummaa namoota du'aniin walqabate wanti miidiyaalee hawaasaa irratti barreeffame dogongora ta'u mootummaan naannichaa BBC'tti dubbate.
Poolisiin osoo dhaabate ilaaluu 'dhalattoonni Tigree sadii dhagaadhaan reebamani ajjeefaman' jedhame miidiyaalee hawaasaa irratti inni barreffamaa ture dhugaa akka hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera.
Hogganaan kominikeeshinii Oromiyaa buufatawwan poolisii magaalaa Naqamtee iyyaafatani odeeffadhe akka jedhanitti eenyummaa namoota du'ani ilaalchise kaleessaa eegalee miidiyaalee hawaasaa irratti wanti qoodamaa ture dogongora ta'u mirkaneessiniiru.
Dabalataanis, ayyaanni Irreechaa magaalaa Naqamteetti yeroo kabajame jeequmsa uumameen namoota sadii du'anin alatti namoonni kudhan miidhaan qaamaa olaanaa akka isaan irratti dhaqqabe quba qabu.
Hogganaan waajjira poolisii magaalichaa komaandar Getaachaw Ittaanaa waldhabdee uumameef sababni meeshaan waraanaa seeraan ala ta'e mana namaa kuufameera jedhame dhara ta'u raadiyoo magaalichatti argamuuf himaniiru.
Namoonni tokko tokko waldhabdee kana sababa godhachuun suuqii fi manneen kuusaa namootaa hatuu isaaniis kan dubbatan.
Waldhabdee kana kaasuu fi kakaasuun namoonni jedhamani shakkaman 16 to'annaa poolisii jala seenuu isaanii obbo Addisuun BBC'tti dubbataniiru.
Ummata Oromoo fi Tigraay gidduutti garaagarummaa uumuun hin danda'amu.
Addisuu Araggaa Qixxeessaa, Hogganaa kominikeeshinii MNO
Hogganaan hospitaala riferaala Naqamtee obbo Abrahaam BBC'f akka himanittii namoonni reebichaa fi waldhabdee uumameen miidhaan irra gahe gara hospitaalaa dhufaniiru.
Isaan keessaa afur yeroosuma tajaajila fayyaa argatani manatti yeroo deebi'an kan hafan garuu achuma jiru jedhan.
Gama kaaniin, naannoon Tigraay dhaabbanni miidiyaa Oromiyaa Biroodkaasting Netwoork(OBN) jedhamu dhiyeenya namni tokko, ''dolaara seeraan alaa qabate osoo socho'u qabameera'' jechuun saba isaa eere wanti gabaase dogongoraa fi dafee sirraa'uu qaba jechuun A.L.I Onkololeessa 20, 2010 xalayaa barreesseera.
Naannoon Tigraay xalayaa barreesse keessatti dhaabbata maqaan isaa eerametti kanaan duras komii dhiyeessuus deebii argachuu dhabuu isaa ibsa.
''Ummata Oromoo fi Tigraay gidduutti garaagarummaa uumuun hin danda'amu,'' kan jedhan obbo Addisuu Araggaan, kanaan dura gabaasni miidiyaan kuni namoota shakkiidhaan qabaman ummata Tigraay waliin walitti fiduun gabaasuun isaa dogongora ta'u amananiiru.
Boordiin dhaabbata miidiyaa kanaa guyyaa kaleessaa dhimmicha gamaggamee gabaasa irratti dogongorri jiraachuu isaa amaname lammata akka hin mudanne kallattiin kennuu isaa BBC'f kan himan.
Gaazexessaan dhimmicha gabaase irrattis dhaabbatichi tarkaanfi fudhachuu isaa kan dubbatan. ''Kanaan duras dogongorri yoo hojjetameera ta'e ni gamaggamna,'' jedhaniiru.
Magaalaa Mattuu dabalate namoonni eenyummaa isaaniin hidhamuu isaanii isa odeeffamuus naannichi qorataa akka jiru obbo Addisuun ibsaniiru.